'Lama-ilaawin' waa hooska Pantone ee aan la iska indha tiri karin | Abuurista khadka tooska ah
'Lama Tilmaami Karo' waa midabka cusub ee uu soo saaray Pantone taasna lama iska indho tiri karo
Waxaan sifiican u naqaanaa Pantone machadkaas oo u heellan midabka iyo in sanad walba ay noo keenaan waxa noqon doona midabada noqon doona isha dhiiri galinta noocyo badan oo kala duwan oo la xiriira farshaxanka. Waxaan ka hadleynaa moodada, sawir qaadista, nashqadda iyo kuwo kaloo badan ...
United Way, ololaheeda cusub, waxay iskaashi la sameysay Pantone Color Institute horumariyo hal midab oo Pantone ah taas oo xoogga saareysa sameynta saboolnimada, rabshadaha qoyska, caafimaadka maskaxda iyo go'doominta bulshada. Dhibaatooyinka si dhow ula xiriira adduunka hanti-wadaagga aan ku nool nahay.
Tan awgeed waxay u abuureen midab taas ayaa loogu yeedhay "Aan la garan karin", sida codkaas aan la iska indho tiri karin. Waa Laurie Pressman, madaxweyne ku xigeenka Machadka Midabka Pantone, oo sheeganaya in midabkani uu si dhakhso leh u soo jiito dareenka qof kasta oo leh dhalaal midab leh oo dhalaalaya kuleylka iyo tamarta.
Iyo haddii aan ka hadalno in astaanta United Way uu abuuray maalinteeda Saul Bass, naqshadeeye caan ah oo caan ahWaxaan fahamsanahay inay wax badan ka dambeeyaan waxa la arki karo marka hore. Fikradda ka dambeysa ololaha United Way waa soo jiito dareenka dadka oo leh midab fidsan oo gaar ah, kaas oo lagu daro sheeko "qarsoon" oo muujineysa dhibaatooyinka maalinlaha ah.
Sidoo kale waa Malika Favre oo ololahan kula soo biirtay sawirro taxane ah taasi waxay qabsaneysaa ujeedooyinkaas ah sameynta dhibaatooyin muuqda ee qof kasta oo aan kula kulmi karno wadada oo aan marnaba iska indho tiri karin. Sidaad u aragto, qaar iyaga ka mid ah si ballaadhan ayay u wadaagaan oo u gudbiyaan dhibaatooyinkaas.
Dhammaan ku dheehan tahay codkaas 'Calaamado aan la garan karin'. United Way waxay la shaqeyneysaa sumcadda Canadian Peace Collective si loo abuuro taxane ah 'Waxyaabaha aan la garan karin' ee qof walboo iibsado si uu u taageero ololaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » 'Lama Tilmaami Karo' waa midabka cusub ee uu soo saaray Pantone taasna lama iska indho tiri karo
Pantone Color IQ Test waa tijaabo loogu talagalay naqshadeeyayaasha si ay u dardar geliyaan xirfaddooda midabbada